Muuqaalka Bulshada: Maxaa sababa soonoqnoqoshada colaadda dagaal beeleedyada? (dhegayso) – Radio Daljir
Muuqaalka Bulshada: Maxaa sababa soonoqnoqoshada colaadda dagaal beeleedyada? (dhegayso)
Noofember 4, 2018 8:20 b 0
Ku soodhawaada dhegaystayaal Barnaamijka Muqaalka Bushada ee Radio Daljir oo maalinkasta ka baaha dhammaan xarumaha Radio Daljir ee Soomaaliya, marka laga reebo maalinta Jimcaha.
Barnaamijka Muuqaalka Bulshada maanta waxa uu ku saabsan yahay sababaha soo celceliya dagaal beeleedyada dalka Soomaaliya halligay. Todobaadkii hore colaad beeleedyo ayaa ka jiray deegaano kamid ah Benderbayla oo u dhexeeya laba beelood.
Dhanka Dhumay ee gobolka Sool, sidoo kale colaad ay ku geeriyoodeen 60 qof dad ka badan ayaa harqisay todobaadyo kahor. Deegaano badan oo dalka ahna la iskuma gudbo sababa la xiriira colaad beeleedyada.
Barnaamijka oo uu xarunta Daljir Bossaso inoo ka daadihinaya Xasan Heykal hoos kaga bogo.
Hay’adda NISA oo sheegtay inay hakisay heshiis malaayiin doolar oo lagu eedeeyey wasiir hore